ပွစိပွစိပြောတဲ့မိဘတွေကြောင့် သားသမီးတွေပိုပြီးအောင်မြင်တာ အမှန်တကယ်ပါ
5 Aug 2019 . 2:09 PM
လူရယ်လို့ဖြစ်လာတာနဲ့ အမေ့အရိပ်အောက်မှာ ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြရတယ်။ ဒါကြောင့် အမေအဖေတွေရဲ့ပွစိပွစိဆူပူစကားတွေကို ဘယ်တုန်းကမှရှောင်လွှဲလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့။ အမေတွေဆိုရင် အမြဲလိုလိုပဲ အခန်းရှုပ်တာကအစ ဆံပင်ပုံမကျတာကအဆုံး ပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးလေ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုမိဘတွေကြောင့်ပဲ သားသမီးတွေက အောင်မြင်နေကြတာလို့ University of Essex ရဲ့ လေ့လာချက်အရ သိရတယ်။
လေ့လာချက်အရ မိဘတွေကနေ အရမ်းမျှော်မှန်းထားတဲ့ သားသမီးတွေက အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိဘတွေကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတာကြောင့် ကိုယ့်သားသမီးအတွက်ပိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ် ၊ ပိုပြီးတော့အနစ်နာခံပေးတယ် ၊ ပိုပြီးတော့တွန်းပို့တယ်။ ဒီလိုတွန်းပို့မှုတွေက သားသမီးတွေအတွက်တစ်ခါတလေမှာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီမျှော်မှန်းချက်တွေကသားသမီးတွေကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ လွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ငါ့အမေကလည်းတစ်ချိန်လုံးပွစိပွစိနဲ့ ငါ့အဖေကလည်းအမြဲဟိုဟာမလုပ်နဲ့ ဒီဟာမလုပ်နဲ့လို့ ပြောနေတာပဲလို့” ဘယ်လိုခံစားနေရပါစေ သူတို့ဒီလိုဖြစ်စေချင်ရင် ငါဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးကလည်း သားသမီးတွေဆီမှာ ကိန်းအောင်းနေပါတယ်။ ဒါတွေကြောင့် မိဘတွေကအရမ်းတွန်းပို့တာခံရတဲ့ သားသမီးတွေက သူတို့မိဘတွေဖြစ်စေချင်တာကိုလိုက်လုပ်ရင်းနဲ့ ပိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြတယ်တဲ့။
ကိုယ့်မိဘကအမြဲပွစိပွစိပြောတိုင်း စိတ်အလိုမကျနဲ့တုန့်ပြန်ပြောနေသေးတယ်ဆိုရင် သူတို့ဘက်ကိုနည်းနည်း ငဲ့ကြည့်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ကလည်းဖြစ်စေချင်လို့ ပြောတာဆိုတာပဲလေ။ ဆူတယ်ဆိုတာချစ်လို့ ဂရုစိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကြောင့် အမေအဖေတွေက ပွစိပွစိပြောနေရင်တောင် ပြန်ခံမပြောဘဲနားထောင်ပေးလိုက်ပါ။ သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်တာမလုပ်တာကတော့ တစ်ကဏ္ဍပေါ့နော်။
by Ngul Ciin .3hours ago
by Naw Hsel Hte .4days ago
by Naw Hsel Hte .6days ago
Frozen ကို ကျော်သွားတဲ့ The Lion King
ပလတ်စတစ်တွေမသုံးတော့တဲ့ နောင်၁ဝနှစ်ကာလမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်မလဲ